‘सन्देश मूलक गीत दिन खोजेको हो, प्याटन परिवर्तन गरेको होइन’
पाल्पा जिल्लाको जल्पा गाबिस वडान ९ राक्सेमा पिता बेदप्रसाद देवकोटा र माता राधादेवी देवकोटाको कोखबाट जन्मिएकी श्रीदेवी देवकोटा अहिले संगीतको क्षेत्रमा निकै चर्चित बन्दै गएकी छन । कन्याइदेउन वाइ चोर विरालो र ढाडे बिरालो जस्ता चर्चित गीतहरु बजारमा ल्याएर चर्चित बनेकी गायिका श्रीदेवी चार जना दिदीबहिनी मध्य कान्छी बहिनी हुन उनी । उनका एक जना दाइ र एक जना भाइ छन । सबैको पारिवारिक माया पाएका कारण साङगितीक क्षेत्रमा लागेकी श्रीदेवी अहिले परिवारको मात्र माया पाएकी छैनन गीत संगीत मनपराउने लाखौ दर्शक तथा श्रोताहरुको ढुकढुकी बनेकी छन । उनै देवकोटासंग गरेको कुराकानीको अंश….
 अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
 पछिल्लो समयमा मेरो आफ्नै तिज गित वान पिस लाए खोल्दिन्छु बाहेक प्राय अरुको गीतमा व्यस्त छु । यसपालिको तीजमा मेरो लगानीमा एउटा मात्र गीत निकाले भने अरुका सात वटा गीतमा स्वर दिएकी छु । त्यसैले पछिल्लो समयमा आफनो भन्दा पनि अरुको गीतमा व्यस्त भए ।
 तपाईंले गाएका गीत सबै प्राय चर्चामा छन्, अघिल्लो वर्षको तिजमा ‘कन्याइदेउन बाई’ र गत वर्षको ‘चोर बिरालो’ निकै चर्चामा रह्यो किन होला ?
 मेरा गितहरु प्राय कमेडि पाराका छन । हस्यौली ठटेउली पाराका भएका कारण श्रोता तथा दर्शकहरुले औधी रुचाए ‘कन्याइ देउन वाइ’ पछि ‘चोर विरालो’ निकाले त्यो गीत निकै चर्चित भयो त्यस पछि ढाडे बिरालो त्यो ढाडे बिरालो गीत ले त चोर विरालो लाई पनि खाइ दियो यि गीताहरु निकै चर्चा हुनुमा यि गीतमा अर्कै खालको स्वाद छ मिठास छ अनी भिडियो पनि अली महगो खालको बनेका थियो ।
 तपाईंको टिममा को–को हुनुहुन्छ ?
 हाम्रो टिममा शंकर बिसी, प्रकाश कटवाल, विनोद ढकाल लगायतका छन् । हामीले कुनै पनि गीत निकाल्दा र म्युजिक भिडियो निर्माण गर्दा टिममा सल्लाह गर्छौं । कसरी जाने निक्र्योल भएपछि मात्रै काम सुरु गर्छौं ।
 अघिल्ला वर्षमा तपाईंको तिजका गीतमा अलि उत्ताउला शब्द थिए, तर यसपालिको तिज गीतमा सन्देशमूलक शब्द छन् । के तपाईंले ‘प्याट्रन’ परिवर्तन गर्नुभएको हो ?
 अघिल्ला सालका तिज गीतमा पनि खासै त्यस्ता शब्दहरु त थिएनन तर बिबादमा आएका होइन्न ल्यायका मात्रै हुन अघिल्लो सालको तीजको गीत ज्योती मगरको छोटो कपडाका कारण चर्चा भएको भन्ने एकथरीको भनाइ आयो । त्यो गीत संस्कृति भन्दा पनि अलि बढि ठटेउली भएको हो कि भन्ने अर्को थरीको प्रतिक्रिया आयो । त्यसैले यो बर्षको गीतसन्देशमूलक बनाउन त भनेरक त्यस अनुसार सन्देश मूलक गीत दिन खोजेको प्याटन परिवर्तन गरेको भन्ने होइन ।
 यसपालिको तिज गीत ‘वानपिसपिस लाए खोल्दिन्छु’ मा तपाईंले नै मोडलिङ गर्नुभएको छ । सन्देश दिनलाई हो कि, ज्योति मगर जस्तै चर्चा कमाउन हो ?
 मैले ज्योती मगर जस्तै बन्छु भनेर म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेको होइन । तीजको गीत भएकाले आफुलाई पनि रहर थियो आफै गरौ न त भनेर गरेको हो । ज्योती मगरको स्थानमा पुगौला मोडल बनौला भनेर अभिनय गरेको होइन ।
 तपाईंको सांगीतिक यात्राबारे बताउनुहोस् न ?
 मलाई सानै देखि नाच्न र गाउन मन लाग्थ्यो । त्यसैले सानैदेखि साङगीतिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन्थे । कार्यक्रमहरुमा नाच्ने गाउने गर्थे । विद्यालयमा आयोजना हुने साङगीतिक कार्यक्रमहरुमा भाग लिन्थे सधै प्रथम हुन्थे । त्यही क्रममा २०६२ सालमा म एसएलसी दिएर काठमाडौ आए । काठमाडौको बसाइ संगै गीतहरु गाउन थाले मैले २०६५ सालमा ‘हिमाल राम्रोहिउले बोलको गीत गाए । त्यसपछि ‘पञ्चेवाजा’ आधुनिक तथा लोक गीत गाए । २०७१मा तीजको गीत ‘कन्याइदेउन वाइ’ संगै रोइला गीत ‘मकै खाउली मोहीसंग’, ‘यो दसैमा आउदैनौ जस्तो छ जस्तो छ( यो गीतामा पनि मैलेनै अभिनय गरेकी छु )‘शिरानी टाङमुनी’, २०७२ सालमा ‘चोर विरालो’, ‘ढाडे बिरालो मच्यायो धकामा’, ‘लाटो कोसेरो’ जस्ता गीतहरु निकाल्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा मेरो तीजको गीत ‘ वान पिस लाए खोल्दिन्छु’ बजार छन ।
 कसको प्रेरणाबाट सांगीतिक क्षेत्रमा आउनुभयो ?
 मैले स्कूलमा नाच्ने गाउने गरेको देखेपछि मलाई शिक्षकहरुले कलाकार बन्छयौ राम्रो गर्दै जाउ भनेर हौसला दिनु हुन्थ्यो । त्यसका साथै मेरो ममीले पनि हौसला दिनु भयो । अझ मेरो ममी त मेरो प्रस्तुती छ भन्ने सुनेपछि मेरो स्कूलमा गएर खुसुक्क मेरै पछाडि लुकेर बस्नुहुन्थ्यो हेर्नु हुन्थ्यो मेरो प्रस्तुती । छोरीले नाचेको र गाएको हेर्न रहर गर्नु हुन्थ्यो उहाँको चाहना अनुसार मैले पनि यस क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन थाले । फलस्वरुप म ममी र मेरा गुरुहरुको प्रेरणाबाट र अहिले घर पारीवारको सपोर्टले आज म एउटा गायिकाको रुपमा चिनिन पाएकी छु ।
 अबका योजना के के छन् ?
 अबका योजना भनेर मैले छुट्टै योजना बनाएकी छैन तैपनि आफनो म्युजिक कम्पनी अन्नपूर्ण भिजन मार्फत काम गरिरहेकी छु । यसैलाई निरन्तरता दिने छु । आफनो कम्पनीबाट आफनैमात्र गीत नभएर अरुका गीतहरु पनि गाउने गरेकी छु । यसलाई निरन्तरता दिने छु । अर्को मेरो पढाईलाई पनि निरन्तर्ता दिदै जानु छ अहिले म डिग्री हासिल गरिसकेकी छु । अझै पढाई तिर लाग्ने सोच बनाइयकी छु।
 पछिल्लो समयमा कार्यक्रममा निकै व्यस्त देखिनुहुन्छ, नेपालबाहेक कुन–कुन देशमा जानुभएको छ ?
 मैले नेपालका त प्राय सबै जिल्लामा गरिएका प्रोग्रामहरु भ्याइ सकेकी छु । त्यसका अलवा दुइव, मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, भारत, सिक्किम जस्ता देशहरुमा आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भैसकेकी छु । अहिले पछिल्लो समयमा क्यानडा जापान र यु के लगायतका मुलुकमा हुने कार्यक्रममा मलाइ अफर आएको थियो तर, मेरो आफनै कारणबाट ले सहभागी हुन नसक्ने भएकाले क्यान्सिल गरेर बसेकी छु ।
 नेपालमा गीत गाएर आम्दानी गर्न सकिँदैन भन्छन्, तपाईंले गीत गाएर कत्तिको आम्दानी गर्नुभयो ?
 हुन त नेपालमा पहिलेको जस्तो क्यासेट सिडी विक्रि गरेर आम्दानी होला भन्ने आधार छैन । अहिले क्यासेटको जमाना त हराइ नै सक्यो भने सिडी किनेर गीत हेर्न पनि छाडि सके । डिजिटल र अनलाइन प्रविधिको विकास संगै प्राय मानिसहरुले युटुवमा नै गीत हेर्ने गरेको छ । तर त्यसले मात्र खर्च उठन सकेको छैन । तर, हामीले आम्दानी गर्ने भनेको स्टेज प्रोग्रामबाट हो । यसैबाट चलेको छ । धैरै कमाउन नसकेपनि चल्न सक्ने आधार बनेको छ ।
 अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
 सबैभन्दा पहिले त मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै जतिपनि अहिलेसम्मका गीतहरु दर्शकहरुले माया गरेर हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो । आज म एउटा गायिका भनेर सबैका अगाडि चिनिन पाएकी छु उहाँहरुकै कारण गर्दा हो त्यसैले भोलिका दिनहरुमा पनि मेरा प्रस्तुतिलाई स्विकार्नु होला भन्दै त्यसका लागि म उहाँहरुप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।